Maamulka degmada C/caziiz oo CID ku wareejiyey dad lagu tuhmay weerarkii safaaradda Turkiga – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Dad lagu tuhunsanyahay iney ka dambeeyeen weerar khasmiistii lasoo dhaafay lagu qaaday halka laga dhisayo safaaradda cusub ee dalka Turkiga ee magaalada Muqdisho ayaa la qabtay, sidaas waxaa warbaahinta u sheegay Cusmaan Muxudiin Cali oo ah gudoomiyaha degmada C/caziiz oo ay ku taallo safaaraadda cusub ee Turkigu dhisanayo.
Guddoomiyaha degmada C/caziiz, Cismaan Muxuyidiin oo shir Jara’id ku qabtay Muqdisho ayaa waxa uu kaga hadlay weerar dhawaan lagu dhaawacay shaqaalo ka soo jeeda dalka Turkiga oo howlo dhismo ah ka waday degmada Cabdi Caziiz.
“Dad ayaa loo soo qab qabtay, kuwaasoo lagu tuhunsan yahay ku lug lahaanshiyaha weerarka lagu dhaawacay muwaadiniin Turkey ah kuwaas oo aan u gudbinay Xarunta CID-da ee magaalada Muqdisho” ayuu yiri guddomomiyaha degmada Cabdi Caziiz Cismaan Muxuyidiin Cali oo warbaahinta la hadlay.
Dhinaca kale Guddoomiyaha ayaa sheegay in ay ku raad joogaan kuna raja weyn yihiin in ay soo qab qabtaan kooxihii ka dambeeyay falkaasi oo ugu yeeray in uu ahaa mid wuxuushnimo ah.
Cismaan Muxuyidiin ayaa ku tilmaamay weerarkii lagu qaaday shaqaalaha Turkiga in uu ahaa dhacdo filan waa ah, ayana aad uga xun yihiin, isagoo xusay in dadkii ka dambeeyay weerarkaasi ay ahaayeen kuwa ka soo horjeeda danaha iyo Horumarka umadda Soomaaliyeed.
Dhawaan ayey ahayd markii magaalada Muqdisho kooxo hubeysan ay weerar ku qaadeen shaqaalo muwaadiniin Turkey oo dhisayey safaaradda cusub ee Trukigu ku yeelanyo Muqdisho, taasoo dhinaca ku heysa Masjidkii caanka ahaa ee degmada C/caziiz, waxaana weerarkaas ku dhaawacmay labo shaqaale Turki ah oo dalkooda loo qaaday.